Tonizia: Firavoravoana nandraisana ny fiafaràn’ny fitondràn’i Ben Ali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2011 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, 한국어, 日本語, Ελληνικά, English
Niala ny fireneny ny Zoma teo, taorian'ny fihetseham-bahoaka naharitra efatra herinandro nandrodana ny 23 taona naha-mpitondra azy, ny filoha Toniziana Zine El Abidine Ben Ali. Nametraka fepetra amin'ny tany misy hotakotaka ny manampahefana, raha tao amin'ny fahitalavi-panjakana kosa dia nanambara ny Praiminisitra Mohammed Ghannouchi fa noraisiny vonjimaika ny toeran'ny Filoha. Nitranga indrindra izany taorian'ny fifandonan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy tao afovoan-tananan'i Tunis renivohitra. Izao fivoaran-draharaha izao dia iray andro taorian'ny fanambaràn'i Ben Ali fa hitsahatra izy rehefa tapitra ny fe-potoam-pitondrany amin'ny 2014. Ilay fikoropahan'i Ben Ali hanainga dia nitranga taorian'ireo herinandro vitsivitsy nisy fihetsiketsehana izay nanomboka tao afovoan-tananan'i Sidi Bouzid talohan'ny nitàrany tany amin'ireo faritra sy tanàna hafa ka farany dia tonga hatrany Tunis renivohitra. Tondraky ny fanehoan-kevitra ny Twitter sy ny tontolon'ny fitorahana bilaogy.
Sary natolotr'i Nawaat.org
Amira Al Hussaini avy any Bahrain manoratra ao amin'ny bilaoginy:
Mitapy hatramin'ny kaonty Twitter-ko – noho ireo fiovaovan'ny toe-draharaha tao Tonizia ary raha ny fijery azy dia tsy mbola ho ato ho ato mihitsy no hitonian'izay. Manatanja-tena amin'ny dite samihafa aho ato, ary roahako ho any an'efitrano any daholo ny sakako fito mba hitombenako tsara manaraka ny tatitra mikasika ireto tranga ara-tantara tafiditra anatin'ny antsoina hoe Revolisiona nateraky ny Twitter ireto
Alaeddine Ghazouani mientanentana manoratra hoe:
Manana ny 14 Jolay azy ireo ny Frantsay. Ankehitriny, manana ny 14 Janoarinay koa izahay! # Sidibouzid # Jasminrevolt #tunisia
Amine (@Afrinomad) manoratra:
Tadidio ny angano momba ny “Lalàmbe Arabo” novakianareo tany anaty boky & gazety tany? Niteny izy ary nanongana mpitondra jadona #sidibouzid
Efatra herinandro lasa izay no nanombohan'izy ity tao an-tanàna afovoan'i Sidi Bouzid raha nandoro ny tenany tanaty hetsi-panoherana natosiky ny famoizam-po i Mohamed Bouazizi, tanora iray 26 taona nahazo diplaoma ambony tamin'ny Anjerimanontolo, tsy an'asa, rehefa noraofin'ny polisy ny latabatra sy ny voankazo ary anana namidiny.
@JawazSafar (Moh'd Yousef) mampahatsiahy antsika amin'ny alalan'ny tweet:
Latabatra iray fivarotam-boankazo no nandrodana fitondràna jadona efa 23 taona.
Mijery ny Lalambe Arabo. Nidina an-dàlambe ny sasany. Manoratra i Thekrah Hazzami (@Thekra_AH) :
: #sidibouzid #Tunisia #Egypt الجزيرة : عشرات المواطنين في القاهرة يتظاهرون أمام السفارة التونسية احتفاء برحيل بن علي
Al Jazeera mitatitra fa ampolony ny olona ao Cairo no manao fihetsiketsehana eo ivelan'ny Masoivoho Toniziana ao Cairo ho fankalazàna ny fialan'i Ben Ali.
Justice centric manantena fa mpitondra Arabo maro no hanaraka ny dian'i Ben Ali. Hoy izy mi-tweet :
Ben Ali, teneno i Mubarak hoe misy fiaramanidina miandry azy koa
Ary dia toy ny nihanaka namakivaky ny tontolo Arabo ny fankafizana. mandefa tweet i Saudi @Mashi9a7 (Khalid &) :
Tehaka nirefodrefotra tany anatin'ny studio-n'ny Aljazeera taorian'ny fanambaràna ny fialan'i Ben Ali # sidibouzid
@Voiceoftunisia (Feon'ny Fahafahana) miantso fahamalinana:
Ry Toniziana, aloha loatra raha izao no hankalàza, tsy mbola tafita isika. mbola any amin'ny antoko RCD mpanao kolikoly ny fahefana. #sidibouzid #tunisia #jasminrevolt
Liliane manoratra ao amin'ny From Beirut With Funk dia miarahaba ny vahoaka. Manoratra izy:
Voalohany indrindra: Mabrouk ho an'ny vahoaka Toniziana! (Avy amin'ny mpandika: ny Mabrouk dia fomba fiarahabana ho an'ny Arabo, mifanandrify amin'ny teny frantsay hoe ‘félicitation’) – Nahavita zavatra ianareo androany, naharoaka mpitondra jadona!
Eny! Tandremo, tandremo tandremo! 14 Janoary 2011, mampahatsiahy ireo Libane tamin'ny 14 Martsa 2005! Nifaly izahay tamin'izany andro izany, nihevitra ho nahazo fiaingana vaovao izahay ary io dia ho fiantombohana vaovao, ka ho firenena iray vaovao no ho avy eny ampara-tazana! Dia jereo izahay ankehitriny!
Ho fanamarihana io andro io, ilay mpitoraka bilaogy Jawaz Safar dia mitanisa ny poeta Arabo Ruba Yassin:
“Indray andro any, inshallah, hiteny amin'ireo zanatsika isika fa hoe nahita ny fiafaran'ny famoretana ary tsy mampaninona na maizina toy inona aza no hizoran'ny zavatra rehetra, miaraka amin'ny finoana sy ny fahavononana dia ho afaka hanova ny tontolo izy ireo ” ~ Ruba Yassin
Vantany vao nandre ny vaovao momba ny fialàn'i Ben Ali ry zareo, maro ireo Toniziana no nidina an-dalambe nankalàza. Nawaat.org, bilaogy Toniziana iray tsy miankina, dia nampàkatra ity video manaraka ity tao amin'ny fantsony YouTube mampiseho ireo vahoakan'i Tunis miravoravo sy mihirahira ny hiram-pirenena: